COVID-19 reopening training: Zulu - SmartStart
Ngaphambi kokuvula udinga ukwenza ezinye izinto ukuze uqiniseke ukuthi uhlelo lwakho lukulungele futhi ulungiselele isayithi lakho. Lapho usubuke ividiyo futhi ufunde amanothi, qeda le mibuzo ukubheka ukuqonda kwakho. Uzokwazi ukwenza futhi imibuzo izikhathi eziningi lapho udinga ukuphumelela futhi uzoqondiswa izimpendulo ezifanele. Uma usuqede ZONKE IZIMPAWU ezi-Quizzes ngempumelelo, ama-SmartStarters azothola isitifiketi sokuphothulwa. Ngikufisela inhlanhla! Uma kunzima, cela umqeqeshi wakho ukuthi akusize.
Ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zivulwa futhi zihamba ngokuphepha nazo zonke izindlela zokuqapha ze-COVID-19, uhulumeni ufuna ukuthi ubeke izinyathelo ezikhethekile ezizosiza ukunciphisa ingozi yokutheleleka kweCoronavirus. Uhulumeni ukhiphe Izinqubo Zokusebenza Ezijwayelekile kanye nemikhombandlela ekhethekile ebeka ukuthi yiziphi lezi zinyathelo. Izinqubo zethu ezijwayelekile zokusebenza kwezinhlelo ze-ECD ngesikhathi sokuqeqeshwa kwe-COVID-19 kukusiza ukuba uqonde lezi futhi wazi ukuthi yini okufanele ziyenze.
Sonke sidinga ukuvumelanisa izimpilo zethu nomsebenzi wethu ukuze siqiniseke ukuthi sisiza ukumisa ukwanda kweCoronavirus futhi siphephe. Izinhlelo ze-ECD zidinga futhi ukuvumelanisa izindlela zazo zansuku zonke nemisebenzi nemisebenzi ngezidingo ezintsha. Kulokhu kuqeqeshwa ufunda ukuthi ungaguqula kanjani uhlelo lwakho lwansuku zonke ukuze uphendule ku-COVID-19. Lapho usubuke ividiyo futhi ufunde amanothi, qeda le mibuzo ukubheka ukuqonda kwakho. Uzokwazi ukwenza futhi imibuzo izikhathi eziningi lapho udinga ukuphumelela futhi uzoqondiswa izimpendulo ezifanele. Uma usuqede ZONKE IZIMPAWU ezi-Quizzes ngempumelelo, ama-SmartStarters azothola isitifiketi sokuphothulwa. Ngikufisela inhlanhla! Uma kunzima, cela umqeqeshi wakho ukuthi akusize.